Zimbabwe's main opposition leader Nelson Chamisa speaks to the Associated Press during an interview at his offices in Harare, Friday, July, 27, 2018. Chamisa said Mondays historic elections is likely to be flawed and that he will lead a campaign of peaceful protests if President Emmerson Mnangagwa wins in a disputed vote. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
0pposition challenger Nelson Chamisa greets supporters as he arrives at a campaign rally in Bindura, Zimbabwe, Friday July 27, 2018. Chamois said in an interview with the Associated Press that Monday's historic election is likely to be flawed and that he will lead a campaign of peaceful protests if former Mugabe deputy and current President Emmerson Mnangagwa wins a disputed vote. (AP Photo/Jerome Delay)
Opposition party supporters cheer opposition challenger Nelson Chamisa at a campaign rally in Bindura, Zimbabwe, Friday July 27, 2018. Chamois said in an interview with the Associated Press that Monday's historic election is likely to be flawed and that he will lead a campaign of peaceful protests if former Mugabe deputy and current President Emmerson Mnangagwa wins a disputed vote. (AP Photo/Jerome Delay)
Opposition party supporters wait for leading opposition challenger Nelson Chamisa to arrive at a campaign rally in Bindura, Zimbabwe, Friday July 27, 2018. Chamois said in an interview with the Associated Press that Monday's historic election is likely to be flawed and that he will lead a campaign of peaceful protests if former Mugabe deputy and current President Emmerson Mnangagwa wins a disputed vote. (AP Photo/Jerome Delay)
A portrait of Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa hangs from the back of a public transport vehicle on the streets of Harare, Friday, July, 27, 2018. Zimbabwes main opposition leader Nelson Chamisa told the Associated Press during an interview that Monday's historic elections is likely to be flawed and that he will lead a campaign of peaceful protests if President Emmerson Mnangagwa wins in a disputed vote. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Nelson Chamisa, center, head of the MDC opposition alliance greets supporters at his rally in Chitungwiza about 30 kilometres east of the capital Harare, Thursday, July, 26, 2018. Chamisa addressed his first rally since rejecting the idea of boycotting elections on Monday despite what he calls a biased election commission, in the first election since the November resignation of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A supporter of Nelson Chamisa, head of the MDC opposition alliance, attends a rally in Chitungwiza about 30 kilometres east of the capital Harare, Thursday, July, 26, 2018. Chamisa addressed his first rally since rejecting the idea of boycotting elections on Monday despite what he calls a biased election commission, in the first election since the November resignation of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Nelson Chamisa, center, head of the MDC opposition alliance greets supporters at a rally in Chitungwiza about 30 kilometres east of the capital Harare, Thursday, July, 26, 2018. Chamisa addressed his first rally since rejecting the idea of boycotting elections on Monday despite what he calls a biased election commission, in the first election since the November resignation of longtime leader Robert Mugabe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)